Imisebenzi - Isikhungo se-EcoTechnology
Ukuzibophezela Kokwehlukahlukana, Ukulingana, Nokufakwa (i-DEI)
E-CET, sikholelwa ukuthi ngamunye wethu unamandla okwenza umehluko. Isidingo sokubhekana nokuguquka kwesimo sezulu nokwakha inguquko enobulungiswa nokulingana emnothweni wekhabhoni ephansi siyaphuthuma kakhulu kunakuqala. Ngeminyaka ecishe ibe ngamashumi amahlanu yomthelela omuhle emphakathini wethu, emnothweni nakwezemvelo, siyazi ukuthi inhloso yethu iqala ngawe.
Chofoza lapha ukuthola izikhundla ezivulekile
Isikhathi sokuphumula, esomuntu siqu nesokugula.
Amaholide angu-13 akhokhelwayo afaka phakathi namaholide amahlanu entantayo azosetshenziswa ngokubona kwakho.
Umshuwalense wezokwelapha nowamazinyo.
403 (b) uhlelo lokuthatha umhlalaphansi olunomdlalo wenkampani oyi-3% ngemuva kwezinyanga eziyi-6
Umshuwalense we-Life & AD & D
Umbono, umshuwalense wokukhubazeka wesikhathi esifushane nesikhathi eside, kanye nomshuwalense wokuphila owengeziwe
Funda kabanzi mayelana nezinzuzo zethu lapha.
Siyawuthanda umsebenzi wethu wezemvelo
Siyabakhathalela abathengi bethu, esisebenza nabo kanye nomphakathi
Sizijabulisa emisebenzini yethu
Sinolwazi, sinenhloso futhi sisekela umsebenzi wethu kwisayensi
Sinobungane futhi siyangeneka kubo bonke
Sihlala sibuza ukuthi "singenza kanjani kangcono kakhulu?"
Sinikeza izixazululo ezintsha, ezisebenzayo nezingabizi kakhulu
Senza njengoba sisho
Isikhungo se-EcoTechnology sizibophezele ekwakheni indawo yokusebenza ehlukahlukene, elinganayo nebandakanya wonke umuntu lapho bonke abasebenzi bezizwa bemukelekile, bephephile, futhi behlonishwa. Kusukela ngo-2020, sesiqale ukuhlolwa kweminyaka eminingi ukuthi singakufaka kanjani lokhu kuzibophezela ngokucophelela nangokucabangisisa kuyo yonke inhlangano.
Sixhumana njalo ngezinhlelo ze-DEI njengoba ziqhubeka futhi zifuna okufakwayo kwabasebenzi bethu, kweBhodi, kanye nabalingani bangaphandle ezigabeni ezahlukahlukene zale nqubo. Ukuqinisekisa ukuthi i-DEI iba yimvelo yesibili kuwo wonke umuntu futhi ihlanganiswe ngokuphelele kunhloso yethu, sihlola izizinda eziyisikhombisa zokusebenza (amagugu enhlangano, ukuphatha, ukuhlela nokuqapha, ukuxhumana nokuzibandakanya, ukuthuthukiswa kwabasebenzi, ingqalasizinda yenhlangano, nezinsizakalo nokusebenzisana) nokukhomba lapho singathuthukisa khona izinhlaka nezinqubo ezisekela i-DEI.
Sikhuthaza kakhulu abafakizicelo abahlukahlukene ukuthi bafake izicelo. Ungafaka izabelo zenkonzo yezempi nanoma yimuphi umsebenzi oqinisekisiwe owenziwa ngokuzithandela. I-CET ngumqashi nomhlinzeki wamathuba alinganayo. Uma unenkinga noma udinga usizo lokuhambisa isicelo sakho, sicela uthumele i-imeyili hr@cetonline.org.
Inikezwe amandla yi ivula efasiteleni elisha
Isikhungo se-EcoTechnology (CET) siyi-Equal Opportunity Employer (EEO). I-CET izinikele kunqubomgomo yokungabandlululi kanye namathuba alinganayo kubo bonke abasebenzi kanye nabafakizicelo bokuqashwa.
Uzothola impendulo ezenzakalelayo uma ufaka isicelo somsebenzi. Sicela uhlole ifolda yakho ye-Junk ukuze uqinisekise ukuthi uthola ukuxhumana okubalulekile okuvela kithi. Sizoxhumana nawe ngenhlolokhono uma ingemuva lakho lihlangabezana nezidingo zethu. Uma ungezwa kithi, uzothola isaziso nge-imeyili lapho sesivale isikhundla.
Ukuqeqeshwa kanye nokuzinikela
I-CET ayinalo uhlelo lokuzithandela. Ukuze ufunde ngohlelo lwethu lwe-EcoFellowship lochwepheshe abasafufusa, Chofoza lapha.
Akukho emthethweni eMassachusetts ukucela noma ukuphatha ukuhlolwa kokuthola amanga njengesimo sokuqashwa noma ukuqhubeka nomsebenzi. Umqashi owephula lo mthetho uzobhekana nezinhlawulo zobugebengu kanye nesikweletu somphakathi. MGL Ch. 149, Isigaba 19B